ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရသည့် ကက်ရ်ှမီးယားဝိသေသဒေသ အခွင့်အရေးနှင့် ဂယက်များ – The Voice Journal
အိန္ဒိယအစိုးရက ဩဂုတ်လ ၅ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ပါကစ္စတန်နှင့် ပိုင်နက်အငြင်းပွားနေသည့် ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ်ကို ဝိသေသဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကက်ရ်ှမီးယားဝိသေသဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၀ ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်း အိန္ဒိယပါလီမန်က ကြေညာခဲ့အပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ကက်ရ်ှမီးယားဒေသမှာ ရုတ်ခြည်းပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရသည်။ အိန္ဒိယတပ်သားသောင်းနှင့်ချီ၍ တပ်ဖြန့်ချထားလိုက်သလို၊ ဂျမူးနှင့် ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းနှစ်ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အင်တာနက်လိုင်းများကိုလည်း ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် ကက်ရ်ှမီးယားပြည်သူများကို ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားစေသည်။
ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ်ဟု ခေါ်သော ဂျမူးနှင့် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသမှာ သမိုင်းကြောင်းအားဖြင့် မင်းသားတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သောဒေသဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ချိန်တွင် ဗြိတိန်အစိုးရက အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံ ခွဲခြမ်းခဲ့ရာမှစတင်၍ နှစ်နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသော ကက်ရ်ှမီးယားဒေသမှာလည်း နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခဲ့ရသည်။
အိန္ဒိယအစိုးရက ကက်ရ်ှမီးယားဒေသကို အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၀၊ ၃၅ (က) တို့အရ ဝိသေသဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ်၏ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်နယ်၏ သီးခြားအလံ၊ လွတ်လပ်စွာဥပဒေပြုရေး စသည်အခွင့်အရေးများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရက ကက်ရ်ှမီးယားဒေသ၏ နိုင်ငံခြားရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုသာ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ်က ရရှိထားသည့် ကိုင်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အနေအထားအရ မြေယာအဆောက်အအုံများ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အခြားသော အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ပြည်နယ်ကသာ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်နယ်တွင်းရှိ မြေယာအဆောက်အအုံများကို ပြည်နယ်ပြင်ပရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အခြေချနေထိုင်ခွင့်များမရှိစေရန် တားဆီးန်ိုင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နရန်ဒြာမိုဒီနှင့် ၎င်း၏ ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီ BJP ပါတီဝင်များမှာ ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ်ကို ဝိသေသဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်သည့် ပုဒ် ၃၇၀ ကို ဆန့်ကျင်နေခဲ့သည်မှာ ကာလကြာရှည်ကတည်းကပင် ဖြစ်သည်။
Jammu: Policemen patrolastreet during restrictions, at Raghunath Bazar in Jammu, Monday, Aug 05, 2019. Restrictions and night curfews were imposed in several districts of Jammu and Kashmir as the Valley remained on edge with authorities stepping up security deployment. (PTI Photo)(PTI8_5_2019_000148B)
ယင်းပုဒ်မကို ပယ်ဖျက်ရန်မှာ BJP ပါတီ၏ ၂၀၁၉ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း၌ ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယထိန်းချုပ်ထားသည့် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသကို အိန္ဒိယနှင့်ပေါင်းစည်းရန်နှင့် ကျန်အိန္ဒိယဒေသများနှင့် တစ်ပြေးတည်းထားရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
ယခုနှစ် ဧပြီနှင့် မေလကကျင်းပခဲ့သည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် BJP ပါတီက ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရရှိခဲ့ရာ ၎င်း၏ရွေးကောက်ပွဲကတိကို အလျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအစိုးရယခုလုပ်ရပ်မှာ စီးပွာရေးနှေးကွေးလေးလံမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်ကို အာရုံလွှဲခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သူများက ဆိုသည်။
ကက်ရ်ှမီးယားပြည်သူအများစုကမူ အိန္ဒိယအစိုးရမှာ မွတ်ဆလင်အများစုနေထိုင်သည့် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် ကက်ရ်ှမီးယားသားမဟုတ်သူများကို မြေယာဝယ်ယူခွင့်ပေးခြင်းဖြင့် လူဦးရေအပြောင်းအလဲဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းချက်ဟု ယူဆထားကြသည်။
ကက်ရ်ှမီးယားဒေသမှာ သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတော့မည်မဟုတ်ဘဲ အခြားသော အိန္ဒိယပြည်နယ်များနည်းတူ အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာရတော့မည် ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယတွင် ပြဋ္ဌာန်းသော ဥပဒေအားလုံးမှာ ကက်ရ်ှမီးယားအတွက်လည်း အလိုအလျောက် ပြဋ္ဌာန်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ် ပြင်ပရှိသူများမှာလည်း ကက်ရ်ှမီးယားပြည်နယ်တွင်းရှိ မြေယာများကို ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ယခုလုပ်ရပ်ကြောင့် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယအစိုးရက ပြောကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသကို ဒေသနှစ်ခုခွဲ၍ ဖက်ဒရယ်အခြေခံအုပ်ချုပ်သည့် နယ်မြေအဖြစ် ခွဲခြမ်းဖွယ် ရှိသည်။
မွတ်ဆလင်အများစုရှိရာ ကက်ရ်ှမီးယားဒေသနှင့် ဟိန္ဒူအများစုရှိရာ ဂျမူးဒေသကိုပေါင်း၍ ဒေသတစ်ခု၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိရာ လာဒတ်ကို ဒေသတစ်ခုဟူ၍ ဒေသနှစ်ခုခွဲ၍ အုပ်ချုပ်ဖွယ်ရှိသည်။
လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီ၏ အဆိုပါလုပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ “ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ အခုလို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်န်ိုင်တာကို အောင်ပွဲရပြီလို့ ထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့လုပ်ရပ်က မှားယွင်းပါတယ်။ သမိုင်းက ခင်ဗျားတို့လုပ်ရပ်မှားကြောင်း သက်သေပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ ပါလီမန်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ဝမ်းနည်းစရာ မှားယွင်းမှုတစ်ခုဆိုတာကို နောက်မျိုးဆက်တွေက သဘောပေါက်နားလည်ပါလိမ့်မယ်” ဟု အတိုက်အခံ ကွန်ဂရက်ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ပီချစ်ဒမ်ဘာရမ်က ပြောကြားသည်။
စာညွှန်း။ ။ Article 370: What happened with Kashmir and why it matters
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတခရီးစဉ်အတွင်း စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နားလည်မှုစာချွန်လွှာ နှစ်ခု ရေးထိုးမည်
ရာသီကို အံတု၊ဖီလာပြုသည့် မြန်မာ့ရွှေ
Previous story ရှုပ်ထွေးလာသော အခြေခံဥပဒေ ကကြိုးများ